ဖွနျ့ဖွူးရေးစငျတာတဈခု Soft Automation
Thursday, 14 November 2019 04:58
မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၁ ဒသမ ၅၈ ဘီလီယံ(ယူရို သန်း) ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ကဏ္ဍစုံအသုံးပြုနိုင်သော သိုလှောင်ရုံတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်မည်
၁။ သီလ၀ါစက်မှုဇုန် (SEZ) ထဲမှာ Warehouse ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ၊ bonded warehouse ကဘာလဲ … ၂။ Bonded Warehouse နဲ့ SEZ Warehouse ကအတူတူပဲလား…. ၃။ Bonded Warehouse ဘယ်လိုလျောက်ရမလဲ …………… ၄။ ပြည်တွင်းမှာလူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ bonded warehouse ဘယ်နှစ်မျိုးရှိမလဲ… လက်ရှိ Logistics ကဏ္ဍနဲ့ပက်သတ်လို့ လူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Bonded Warehouse နဲ့ပက်သတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော SEZ Bonded Warehouse အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့တဲ့ Daizen Myanmar ကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director ဖြစ်သူ Tomoaki Yabe နဲ့ ၁၂ရက်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၉ခုနှစ်က သွားရောက်မေးမြန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ >>>Cold Storages အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံဝန်ဆောင်မှုပေါင်း ၇၇ ခုကိုရှာဖွေရန်နှိပ်ပါ<<< Tomoaki Yabe အနေနဲ့ Daizen Myanmar ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကို ပြန်လည်ပြောပေးထား တာပဲဖြစ်ပါတယ်။Daizen Myanmar ကို၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ စပြီး ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ SEZ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် SEZအဖွဲ့ထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လ ပိုင်းမှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ SEZ Warehouse လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရခဲ့ပြီး ဘယ်လိုတွေကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ဘာတွေလိုအပ်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ ပက်သတ်ပြီးရှင်းပြပေးထားတာပါ။၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂ လပိုင်း ၂၄ ရက်မှာ SEZ Warehouse လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရခဲ့ပါတယ်။ SEZ Warehouse အနေဖြင့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရခဲ့ပါတယ်။ Bonded Warehouseလို့ သိကြပေမဲ့ တကယ်တမ်း တရားဝင် သုံးနှုန်းတာကတော့ free zone warehouse လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ တကယ့်တကယ် လိုင်စင်ရဲ့ အမျိုးအစားကတော့ SEZ Warehouse ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ free zone warehouse ရော သာမန် warehouseရော နှစ်ခုစလုံး လုပ်ကိုင်ခွင့် ပါမစ်ကို ရပါတယ်။ warehouse မှာ ပစ္စည်းလာထားတယ်။ custom က လာစစ်တယ်။ ပစ္စည်းပိုင်ရှင် customer နဲ့ custom တို့ကြားမှာ Daizen Myanmar က အကုန်လုံးကို တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုပြီး free zone warehouse မှာ ပစ္စည်းတွေကို Accept လုပ်ပေးထားပါတယ်။ SEZ ဆိုတာဘာလဲ၊ SEZ Bonded Warehouse နဲ့ပက်သတ်လို့ သက်ဆိုင်ရာကချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီးလည်း အခုလိုရှင်းပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။ SEZ ဆိုတာက Special Economic Zone ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှာလည်း SEZ တွေ ရှိပါတယ်။ SEZ ထဲမှာ စက်ရုံတွေ ရှိမယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ကိုင်တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာပဲ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ကိုင်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာပဲ ပြန်ဖြန့်တယ်။ promotion zone လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်တယ်။ သူက export only ပဲ လုပ်တယ်။ free zone ရှိတယ်။ >>>Distributors ဖြန့်ချိရေးဝန်ဆောင်မှုပေါင်း ၉၄ ခုကိုရှာဖွေရန်နှိပ်ပါ<<< နိုင်ငံတွေမှာ SEZ ကို ထူထောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာ ပါလာမယ့် technology တွေကို ကိုယ့်ဆီမှာ ပြန်ဖြန့်ဖြူးချင်တဲ့အတွက် infrastructure တစ်ခုကို လုပ်ပေးထားလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ အဓိကအားဖြင့် promotion zone ရယ်၊ free zone ရယ် ရှိတယ်။ Promotion zone ရယ်၊ free zone တွေမှာ production တွေ လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ ဖြန့်ဖြူးကြတယ်။ အဲဒီအတွက် SEZ မှာ supply chain အတွက် စပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုမယ့်သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်တယ်။ Product ထုတ်လုပ်မယ့် ကုမ္ပဏီတွေက ကုန်ကြမ်း raw materials တွေကို တင်သွင်းလာမယ်။ ဒီမှာ သူတို့ ထုတ်လုပ်မယ်။ ပြီးရင်ဖြန့်ချိမယ်။ transport လုပ်ရတယ်။ ဒီဟာတွေ အကုန်လုံး ပြီးစီးသွားဖို့ အတွက် logistics ကုမ္ပဏီရှိဖို့ အဓိကအားဖြင့် လိုအပ်လာတယ်။ SEZ ထဲမှာ promotion zone ရယ်၊ free zone ရယ် ရှိနေတာမှာ free zoneမှာ ကျတော့ ပစ္စည်းတွေကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းလို့ ရတယ်။ promotion zone ကျတော့ သွင်းလာသမျှ ပစ္စည်းတွေကို အခွန်ဆောင်ထားရတယ်။ Production က ပိုတိုးလာတယ်ဆိုရင် သူတို့ ပစ္စည်းတွေ ထားသိုဖို့ နေရာတွေ လိုအပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါ SEZ အထဲမှာ အဲဒီအတွက် warehouse ထားရှိပေးတာမှာ promotion zone အတွက်နဲ့ free zone အတွက်ဆိုပြီး နှစ်ခုခွဲမှရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခွန်မဆောင်သေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရှိမယ်။ အခွန်လုံးဝ ပေးဆောင်စရာ မလိုတာရှိမယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုး ထားဖို့ SEZ အထဲမှာ SEZ warehouse လိုကိုလိုအပ်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း SEZ ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာဆိုရင် အခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ free zone နဲ့ပက်သတ်တဲ့ warehouse ရှိကို ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးစလုံးကို အထောက်အကူ ပေးနိုင်ဖို့ Daizen Myanmar ကုမ္ပဏီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး လုပ်ကိုင်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ လိုင်စင်ရဖို့ စလျှောက်တယ်။ လျှောက်ထားတုန်းမှာ warehouse ကိုစဆောက်တယ်။ တည်ဆောက်မှု လုံးဝပြီးသွားတာက ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၆ လပိုင်းမှာ ပြီးတယ်။ တကယ့်တကယ် လိုင်စင်ရလာတာက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂ လပိုင်းကျမှရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင်ရဖို့ နှစ်ဝက်လောက် ကြာခဲ့တယ်။ research လုပ်တာတွေ၊ review လုပ်တာတွေအတွက် အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ Thilawa SEZ Management Committee ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီ ကော်မတီကနေချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းမှာ SEZ warehouse အတွက်လိုအပ်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်။ ပြီးတော့ warehouse ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ ဘာတွေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီးသား ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ လိုင်စင်ကို စလျှောက်ကတည်းက အဲဒီ rules and regulations တွေကို သေသေချာချာ လေ့လာပြီးတော့မှ အဲဒီအချက်တွေအတိုင်း လိုင်စင်ကို လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို ရခဲ့ပေမဲ့ ဒီလိုင်စင်ကို သုံးစွဲပြီးတော့ လုပ်ငန်းစဖို့ အချိန်နည်းနည်း ကြာခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ SEZ custom ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ဒီဘက်ကမ်းမှာ custom ရှိတယ်။ ပြီးတော့ Thilawa SEZ Management Committe ရှိတယ်။ အဲဒီ ၃ ဖွဲ့စလုံး အကျုံးဝင်တဲ့ တသမတ်တည်း သေသေချာချာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ မရှိဘူး။ အဲဒီ ၃ ဖွဲ့မှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကွဲလွဲနေတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီ ၃ ဖွဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ဆွေးနွေးကြပြီးတော့ rules and regulation တွေကို ရလာတဲ့အထိ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးတော့ စောင့်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလို ညှိနှိုင်းကြတာမှာ ဘာတွေကို ညှိလို့ မရသလဲဆိုတော့ custom ကျတော့ ဒီပစ္စည်းတွေက ၀င်လာပြီ။ Daizen Myanmar ရဲ့ warehouse မှာ ထားမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီပစ္စည်းကို ပြန်ထုတ်ယူပြီး အခွန်မ ဆောင်ဘဲ ရောင်းစားလိုက်တာမျိုးကို သူတို့က စိတ်ပူတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ inventory ကို ဘယ်လို record လုပ်မလဲ။ ပစ္စည်း ခုရေ တစ်ရာ ၀င်လာမယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေက အခွန်မဆောင်ထားဘူး။ ပြန်ထုတ်တော့ အကုန်လုံး ထုတ်တာလား၊ တချို့ပဲ ထုတ်တာလား ဆိုတာတွေအတွက် inventory ရဲ့ control တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး custom က စိတ်ပူတယ်။ Thilawa SEZ Management Committee ကကျတော့ ဘာကို စိတ်ပူတာလဲဆိုတော့ သွင်းလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေက free zone warehouse ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ အခွန်မဆောင်ရလို့ မစစ်ဆေးရသေးဘူး။ အဲဒီအခါမှာ သွင်းခွင့် မရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ခွင့်ပြုချက် မရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းမှာကို စိတ်ပူတယ်။ ဘယ်လို အချက်မျိုးတွေကို အခြေခံပြီးတော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲ။ ဒီလိုဟာမျိုးတွေ တင်သွင်းမလာအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ဒီတော့ ဒီလို အချက်မျိုးတွေကို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲဆိုတာ သူတို့အချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။ အဲဒီလို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီး အတည်ပြုပေးတာကို စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အတွက် Daizen Myanmar အနေဖြင့် ၂ လပိုင်းမှာ လိုင်စင် ရပေမဲ့ တကယ့်တကယ် စသုံးခဲ့ရတာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၂ လပိုင်းကျမှ ဖြစ်ပါတယ်။ >>>Racking Storage Systems နှင့်ပက်သတ်ပြီးကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၉ ခုကိုရှာဖွေရန်နှိပ်ပါ<<< SEZ warehouse လျှောက်ထားဖို့နဲ့ပက်သတ်ပြီး အရေးကြီးအချက်လက်တွေကိုလည်း အခုလိုရှင်းပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။SEZ warehouse လိုင်စင်ကို လျှောက်ဖို့ အဓိက အချက် ၄ ချက် ရှိတယ်။ ပထမတစ်ချက်က လျှောက်ထားမယ့် ကုမ္ပဏီသည် financial အတွက် အပါအ၀င် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ရမယ်။ တကယ်ခိုင်မာတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ရမယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ custom officers တွေက အချိန်မရွေး warehouse ကို လာစစ်ဆေးမယ်။ စစ်ဆေးတာကို လက်ခံနိုင်ရမယ်။ warehouse ဆောက်မယ်ဆိုကတည်းက specification ကလည်း အဲဒီ ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်နေရမယ်။ တတိယမြောက် တစ်ချက်ကတော့ ၂၄ နာရီ ပတ်လည် CCTV နဲ့ အမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်နေရမယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ freezone warehouse နဲ့ သာမန် warehouse ကို နေရာ သေသေချာချာ ကာရံထားပြီး သီးသီးခြားခြား သတ်မှတ်ထားရမယ်။ SEZ bonded Warehouse နဲ့ အခြားသော အပြင်က bonded Warehouse တို့ရဲ့ကွာခြားမှုနဲ့ တကယ်လို့ များအခွင့်အရေးရခဲ့ရင် အပြင်က bonded warehouse ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိမရှိ။ Daizen Myanmar လုပ်ကိုင်နေတာက Free zone warehouse ဖြစ်တဲ့အတွက် SEZ ထဲမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်း လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ SEZ မဟုတ်တဲ့ နေရာ အပြင်မှာ ကျတော့ bonded warehouse ကို အခုမှ ခွင့်ပြုမယ် စမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ မသိရသေးလို့ နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားလို့ မရနိုင်သေးဘူး။ ဒီတော့ ကွာခြားချက်တွေကို ပြောပြဖို့ ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ Daizen Myanmar အနေဖြင့် အခုလို လုပ်ကိုင်တာတွေကို အတွေ့အကြုံ ရှိထားပြီးဖြစ်လို့ တကယ်လို့ SEZ မဟုတ်တဲ့ အပြင်နေရာမှာ bonded warehouse လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်သာခဲ့ရင်တော့ ရထားပြီးသား အတွေ့အကြုံတွေကို အသုံးချပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖက်ရန်>>>>>>>>> Custom bonded warehouse နဲ့ပကျသတျပွီး ဘာတှသေိထားပွီးပွီလဲ? ၁။ သီလဝါစကျမှုဇုနျ (SEZ) ထဲမှာ Warehouse ဘယျနှဈမြိုးရှိသလဲ၊ bonded warehouse ကဘာလဲ … ၂။ Bonded Warehouse နဲ့ SEZ Warehouse ကအတူတူပဲလား…. ၃။ Bonded Warehouse ဘယျလိုလြောကျရမလဲ …………… ၄။ ပွညျတှငျးမှာလူစိတျဝငျစားနတေဲ့ bonded warehouse ဘယျနှဈမြိုးရှိမလဲ… လကျရှိ Logistics ကဏ်ဍနဲ့ပကျသတျလို့ လူအမြားစိတျဝငျစားနတေဲ့ Bonded Warehouse နဲ့ပကျသတျပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံးသော SEZ Bonded Warehouse အဖွဈ လုပျကိုငျခှငျ့ရရှိထားခဲ့တဲ့ Daizen Myanmar ကုမ်ပဏီရဲ့ Managing Director ဖွဈသူ Tomoaki Yabe နဲ့ ၁၂ရကျနေ့ စကျတငျဘာလ ၂၀၁၉ခုနှဈက သှားရောကျမေးမွနျးထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ Tomoaki Yabe အနနေဲ့ Daizen Myanmar ကိုစတငျတညျထောငျခဲ့တဲ့အခြိနျလေးကို ပွနျလညျပွောပေးထား တာပဲဖွဈပါတယျ။Daizen Myanmar ကို၂၀၁၅ ခုနှဈ ၅ လပိုငျးမှာ စပွီး ထူထောငျခဲ့ပါတယျ။ SEZ ကုမ်ပဏီတဈခု ဖွဈတဲ့အတှကျ SEZအဖှဲ့ထံမှ ရငျးနှီးမွှုပျနှံခှငျ့ကို ၂၀၁၅ ခုနှဈ ၅ လ ပိုငျးမှာ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဘယျအခြိနျမှာ SEZ Warehouse လုပျပိုငျခှငျ့ကိုရခဲ့ပွီး ဘယျလိုတှကွေိုးစားခဲ့ရတယျ။ ဘာတှလေိုအပျခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ ပကျသတျပွီးရှငျးပွပေးထားတာပါ။၂၀၁၇ ခုနှဈ ၂ လပိုငျး ၂၄ ရကျမှာ SEZ Warehouse လုပျကိုငျခှငျ့ကို ရခဲ့ပါတယျ။ SEZ Warehouse အနဖွေငျ့လုပျငနျး လုပျကိုငျခှငျ့ကို ရခဲ့ပါတယျ။ Bonded Warehouseလို့ သိကွပမေဲ့ တကယျတမျး တရားဝငျ သုံးနှုနျးတာကတော့ free zone warehouse လို့ သုံးနှုနျးပါတယျ။ တကယျ့တကယျ လိုငျစငျရဲ့ အမြိုးအစားကတော့ SEZ Warehouse ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအထဲမှာ free zone warehouse ရော သာမနျ warehouseရော နှဈခုစလုံး လုပျကိုငျခှငျ့ ပါမဈကို ရပါတယျ။ warehouse မှာ ပစ်စညျးလာထားတယျ။ custom က လာစဈတယျ။ ပစ်စညျးပိုငျရှငျ customer နဲ့ custom တို့ကွားမှာ Daizen Myanmar က အကုနျလုံးကို တာဝနျယူပါတယျဆိုပွီး free zone warehouse မှာ ပစ်စညျးတှကေို Accept လုပျပေးထားပါတယျ။ SEZ ဆိုတာဘာလဲ၊ SEZ Bonded Warehouse နဲ့ပကျသတျလို့ သကျဆိုငျရာကခမြှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးတှနေဲ့ တှကွေုံ့ခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ပကျသတျပွီးလညျး အခုလိုရှငျးပွပေးထားခဲ့ပါတယျ။ SEZ ဆိုတာက Special Economic Zone ပါ။ တရုတျနိုငျငံ၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံတို့မှာလညျး SEZ တှေ ရှိပါတယျ။ SEZ ထဲမှာ စကျရုံတှေ ရှိမယျ။ ကုနျထုတျလုပျမှုလုပျကိုငျတယျ။ ဒီနိုငျငံမှာပဲ ထုတျလုပျမှုလုပျကိုငျပွီး ဒီနိုငျငံမှာပဲ ပွနျဖွနျ့တယျ။ promotion zone လို့ချေါပါတယျ။ နောကျတဈမြိုးက ပွညျပပို့ကုနျအဖွဈ ထုတျလုပျတယျ။ သူက export only ပဲ လုပျတယျ။ free zone ရှိတယျ။ နိုငျငံတှမှော SEZ ကို ထူထောငျရတဲ့ ရညျရှယျခကျြက ပွညျပမှ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှကေို ဖိတျချေါခငျြတယျ။ ပွီးတော့ သူတို့ဆီမှာ ပါလာမယျ့ technology တှကေို ကိုယျ့ဆီမှာ ပွနျဖွနျ့ဖွူးခငျြတဲ့အတှကျ infrastructure တဈခုကို လုပျပေးထားလိုကျတယျ။ အဲဒီမှာ အဓိကအားဖွငျ့ promotion zone ရယျ၊ free zone ရယျ ရှိတယျ။ Promotion zone ရယျ၊ free zone တှမှော production တှေ လုပျကိုငျကွတယျ။ ဖွနျ့ဖွူးကွတယျ။ အဲဒီအတှကျ SEZ မှာ supply chain အတှကျ စပွီး လုပျကိုငျဖို့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုပွုမယျ့သူတှကေို ဖိတျချေါတယျ။ Product ထုတျလုပျမယျ့ ကုမ်ပဏီတှကေ ကုနျကွမျး raw materials တှကေို တငျသှငျးလာမယျ။ ဒီမှာ သူတို့ ထုတျလုပျမယျ။ ပွီးရငျဖွနျ့ခြိမယျ။ transport လုပျရတယျ။ ဒီဟာတှေ အကုနျလုံး ပွီးစီးသှားဖို့ အတှကျ logistics ကုမ်ပဏီရှိဖို့ အဓိကအားဖွငျ့ လိုအပျလာတယျ။ SEZ ထဲမှာ promotion zone ရယျ၊ free zone ရယျ ရှိနတောမှာ free zoneမှာ ကတြော့ ပစ်စညျးတှကေို အခှနျကငျးလှတျခှငျ့ဖွငျ့ တငျသှငျးလို့ ရတယျ။ promotion zone ကတြော့ သှငျးလာသမြှ ပစ်စညျးတှကေို အခှနျဆောငျထားရတယျ။ Production က ပိုတိုးလာတယျဆိုရငျ သူတို့ ပစ်စညျးတှေ ထားသိုဖို့ နရောတှေ လိုအပျလာတယျဆိုတဲ့အခါ SEZ အထဲမှာ အဲဒီအတှကျ warehouse ထားရှိပေးတာမှာ promotion zone အတှကျနဲ့ free zone အတှကျဆိုပွီး နှဈခုခှဲမှရမယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခှနျမဆောငျသေးတဲ့ ပစ်စညျးတှေ ရှိမယျ။ အခှနျလုံးဝ ပေးဆောငျစရာ မလိုတာရှိမယျ။ အဲဒီနှဈမြိုး ထားဖို့ SEZ အထဲမှာ SEZ warehouse လိုကိုလိုအပျလာတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရငျလညျး SEZ ရဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှထေဲမှာဆိုရငျ အခှနျနဲ့ပတျသကျလို့ free zone နဲ့ပကျသတျတဲ့ warehouse ရှိကို ရှိရမယျဆိုတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ရှိထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနှဈမြိုးစလုံးကို အထောကျအကူ ပေးနိုငျဖို့ Daizen Myanmar ကုမ်ပဏီက ရငျးနှီးမွှုပျနှံပွီး လုပျကိုငျမယျ့ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ၅ လပိုငျးမှာ လိုငျစငျရဖို့ စလြှောကျတယျ။ လြှောကျထားတုနျးမှာ warehouse ကိုစဆောကျတယျ။ တညျဆောကျမှု လုံးဝပွီးသှားတာက ၂၀၁၆ ခုနှဈ ၆ လပိုငျးမှာ ပွီးတယျ။ တကယျ့တကယျ လိုငျစငျရလာတာက ၂၀၁၇ ခုနှဈ ၂ လပိုငျးကမြှရခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ လိုငျစငျရဖို့ နှဈဝကျလောကျ ကွာခဲ့တယျ။ research လုပျတာတှေ၊ review လုပျတာတှအေတှကျ အခြိနျပေးခဲ့ရပါတယျ။ Thilawa SEZ Management Committee ဆိုတာ ရှိတယျ။ အဲဒီ ကျောမတီကနခေမြှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးမှာ SEZ warehouse အတှကျလိုအပျတဲ့ ညှနျကွားခကျြတှရှေိတယျ။ ပွီးတော့ warehouse ကို မဖွဈမနေ လုပျကိုငျတဲ့အခါ ဘာတှကေို လိုကျနာရမယျဆိုတာ သတျမှတျထားပွီးသား ရှိပါတယျ။ ဒီတော့ လိုငျစငျကို စလြှောကျကတညျးက အဲဒီ rules and regulations တှကေို သသေခြောခြာ လလေ့ာပွီးတော့မှ အဲဒီအခကျြတှအေတိုငျး လိုငျစငျကို လြှောကျထားခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ လုပျကိုငျခှငျ့ လိုငျစငျကို ရခဲ့ပမေဲ့ ဒီလိုငျစငျကို သုံးစှဲပွီးတော့ လုပျငနျးစဖို့ အခြိနျနညျးနညျး ကွာခဲ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ SEZ custom ရှိတယျ။ ရနျကုနျမွို့ ဒီဘကျကမျးမှာ custom ရှိတယျ။ ပွီးတော့ Thilawa SEZ Management Committe ရှိတယျ။ အဲဒီ ၃ ဖှဲ့စလုံး အကြုံးဝငျတဲ့ တသမတျတညျး သသေခြောခြာ သတျမှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ မရှိဘူး။ အဲဒီ ၃ ဖှဲ့မှာ တဈခုနဲ့ တဈခု ကှဲလှဲနတေယျ။ ဒီတော့ အဲဒီ ၃ ဖှဲ့ တဈပွိုငျတညျး ဆှေးနှေးကွပွီးတော့ rules and regulation တှကေို ရလာတဲ့အထိ အခြိနျနညျးနညျးပေးပွီးတော့ စောငျ့ခဲ့ရတယျ။ အဲဒီလို ညှိနှိုငျးကွတာမှာ ဘာတှကေို ညှိလို့ မရသလဲဆိုတော့ custom ကတြော့ ဒီပစ်စညျးတှကေ ဝငျလာပွီ။ Daizen Myanmar ရဲ့ warehouse မှာ ထားမယျ။ ပွီးရငျ အဲဒီပစ်စညျးကို ပွနျထုတျယူပွီး အခှနျမ ဆောငျဘဲ ရောငျးစားလိုကျတာမြိုးကို သူတို့က စိတျပူတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ inventory ကို ဘယျလို record လုပျမလဲ။ ပစ်စညျး ခုရေ တဈရာ ဝငျလာမယျ။ အဲဒီပစ်စညျးတှကေ အခှနျမဆောငျထားဘူး။ ပွနျထုတျတော့ အကုနျလုံး ထုတျတာလား၊ တခြို့ပဲ ထုတျတာလား ဆိုတာတှအေတှကျ inventory ရဲ့ control တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး custom က စိတျပူတယျ။ Thilawa SEZ Management Committee ကကတြော့ ဘာကို စိတျပူတာလဲဆိုတော့ သှငျးလာတဲ့ ပစ်စညျးတှကေ free zone warehouse ဖွဈတာကွောငျ့မို့လို့ အခှနျမဆောငျရလို့ မစဈဆေးရသေးဘူး။ အဲဒီအခါမှာ သှငျးခှငျ့ မရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှေ၊ ခှငျ့ပွုခကျြ မရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှေ တငျသှငျးမှာကို စိတျပူတယျ။ ဘယျလို အခကျြမြိုးတှကေို အခွခေံပွီးတော့ ကာကှယျပေးနိုငျမလဲ။ ဒီလိုဟာမြိုးတှေ တငျသှငျးမလာအောငျ ဘယျလို လုပျမလဲ။ဒီတော့ ဒီလို အခကျြမြိုးတှကေို ဘယျလို လုပျကွမလဲဆိုတာ သူတို့အခငျြးခငျြး ဆှေးနှေးကွတယျ။ အဲဒီလို ဆှေးနှေးညှိနှိုငျးကွပွီး အတညျပွုပေးတာကို စောငျ့ဆိုငျးရတဲ့အတှကျ Daizen Myanmar အနဖွေငျ့ ၂ လပိုငျးမှာ လိုငျစငျ ရပမေဲ့ တကယျ့တကယျ စသုံးခဲ့ရတာ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ၁၂ လပိုငျးကမြှ ဖွဈပါတယျ။ SEZ warehouse လြှောကျထားဖို့နဲ့ပကျသတျပွီး အရေးကွီးအခကျြလကျတှကေိုလညျး အခုလိုရှငျးပွပေးထားခဲ့ပါတယျ။SEZ warehouse လိုငျစငျကို လြှောကျဖို့ အဓိက အခကျြ ၄ ခကျြ ရှိတယျ။ ပထမတဈခကျြက လြှောကျထားမယျ့ ကုမ်ပဏီသညျ financial အတှကျ အပါအဝငျ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ ကုမ်ပဏီ ဖွဈရမယျ။ တကယျခိုငျမာတဲ့ ကုမ်ပဏီ ဖွဈရမယျ။ ဒုတိယတဈခကျြကတော့ custom officers တှကေ အခြိနျမရှေး warehouse ကို လာစဈဆေးမယျ။ စဈဆေးတာကို လကျခံနိုငျရမယျ။ warehouse ဆောကျမယျဆိုကတညျးက specification ကလညျး အဲဒီ ပုံစံအတိုငျး ဖွဈနရေမယျ။ တတိယမွောကျ တဈခကျြကတော့ ၂၄ နာရီ ပတျလညျ CCTV နဲ့ အမွဲတမျး စောငျ့ကွညျ့နရေမယျ။ နောကျတဈခကျြကတော့ freezone warehouse နဲ့ သာမနျ warehouse ကို နရော သသေခြောခြာ ကာရံထားပွီး သီးသီးခွားခွား သတျမှတျထားရမယျ။ SEZ bonded Warehouse နဲ့ အခွားသော အပွငျက bonded Warehouse တို့ရဲ့ကှာခွားမှုနဲ့ တကယျလို့ မြားအခှငျ့အရေးရခဲ့ရငျ အပွငျက bonded warehouse ကိုလုပျကိုငျဖို့ရော အစီအစဉျရှိမရှိ။ Daizen Myanmar လုပျကိုငျနတောက Free zone warehouse ဖွဈတဲ့အတှကျ SEZ ထဲမှာ ခမြှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှအေတိုငျး လုပျကိုငျရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ SEZ မဟုတျတဲ့ နရော အပွငျမှာ ကတြော့ bonded warehouse ကို အခုမှ ခှငျ့ပွုမယျ စမယျဆိုတော့ ဘယျလိုအခကျြအလကျတှေ ခမြှတျဆောငျရှကျမယျဆိုတာ မသိရသေးလို့ နှိုငျးယှဉျပွောကွားလို့ မရနိုငျသေးဘူး။ ဒီတော့ ကှာခွားခကျြတှကေို ပွောပွဖို့ ခကျခဲနပေါသေးတယျ။ Daizen Myanmar အနဖွေငျ့ အခုလို လုပျကိုငျတာတှကေို အတှအေ့ကွုံ ရှိထားပွီးဖွဈလို့ တကယျလို့ SEZ မဟုတျတဲ့ အပွငျနရောမှာ bonded warehouse လုပျကိုငျဖို့ အခှငျ့သာခဲ့ရငျတော့ ရထားပွီးသား အတှအေ့ကွုံတှကေို အသုံးခပြွီး လုပျကိုငျဖို့ အစီအစဉျ ရှိပါတယျ။ MyanmarLogisticsGuide